ဒီနေ့မှာ မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် ယုန်လေး – အနုပညာရပ်ဝန်း
ဒီနေ့မှာ မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် ယုန်လေး
by Cele Gossip
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ(၁၃) ရက်နေ့လေးကတော့ ယုန်လေးရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပါ။ ယုန်လေးကတော့ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ သရုပ်ဆောင်၊ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ အများနဲ့မတူ ကွဲထွက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်အသိမှတ်ပြုအားပေးခြင်းရရှိခဲ့သူပါ။ ]
မိဘမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုန်လေးကတော့ ဟိုးအရင်ကတည်းက ဘဝတူတွေကို ဖေးမကူညီပေးလေ့ရှိသလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကာလစတင်ကတည်းက ချို့တဲ့သူတွေ၊ ခက်ခဲသူတွေအတွက် ဆက်တိုက်ကူညီပေးလာသူပါ။ မကြာသေးခင်ကမှ သူ့ရဲ့မွေးနေ့အကြိုလှူဒါန်းမှုအနေနဲ့ ဆန်၊ဆီနဲ့ ထီလက်မှတ်တွေကို လိုအပ်နေသူတွေရဲ့ အိမ်ရှေ့အရောက်လိုက်လံလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ လှူနေကျအလှူလေးဖြစ်တဲ့ ဘာသာကြီးလေးခု စလုံးကို တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပရိသတ်ဝေဖန်မှုမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းဗွီဒီယိုတစ်ခုကြောင့် အနုပညာလုပ်ခွင့်တစ်နှစ်ပိတ်ခံလိုက်ရပေမယ့်လည်း လူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ ခွန်အားသစ်မွေးပြီး ပြန်လည်နိုးထလာခဲ့တဲ့ ကိုယုန်လေးရေ ရှေ့လျှောက် ဒီထက်မက အလုပ်တွေအဆင်ပြေပြီး စိတ်ရှိတိုင်းလှူဒါန်းပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆယ်လီကမ္ဘာမှမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source – Yone Lay
Scarlett လေးရဲ့(၂) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရရိုက်ကူးထားတဲ့ဗွီဒီယိုလေးကို မျှဝေလာတဲ့ Ah Boy
လူကြည့်များနေသော ထိပ်တန်းနာမည်ကြီး အဆိုတော် (၄၅) ယောက် ပါဝင် သီဆို ထားတဲ့ “အောင်လံ လွှင့်မည် NLD” သီချင်း
မယ်စကြဝဠာNational Costume ဝတ်စုံပြိုင်ပွဲ၌...
Copyright © 2021. Created by အနုပညာရပ်ဝန်း.